Cinegif: Cinemabras डिजाइन र एनिमेटेड Gifs Martech Zone
शनिबार, सेप्टेम्बर 21, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
भिडियो आधुनिक ईमेल क्लाइन्टहरू द्वारा प्ले गरिएको छैन, तपाईं अझै पनि एनिमेटेड gifs को साथ तपाईंको दर्शकहरूको ध्यान कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ। एक राम्रो डिजाइन एनिमेटेड gif आफ्नो बढाउन सक्छ ईमेल क्लिक-थोरै दरहरू डबल अंक द्वारा र ती तपाइँको औसत वेबसाइटमा विजिटरहरू टाढा ड्राइभ बिना नै शानदार देखिन्छन्। ब्राउजरमा सामग्री वा वरपरका छविहरूमा सूक्ष्म आन्दोलन देख्न पर्यटकहरू ब्यस्त छैनन् जबसम्म उनीहरू प्ले बटन क्लिक गरिरहेका हुँदैनन्।
डिजाइनरहरूको लागि प्रश्न यो हो कि कोही तिनीहरूलाई कसरी बनाउने बारेमा जान्छ? तपाईं फोटोशप जस्ता उपकरणको बिलकुल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोबाट फ्रेमहरू तान्न एनिमेसन उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ… तर त्यसले कामको कम्तीमा लिन सक्दछ। सिनेगिफ त्यहि ठाउँमा आउँछन् - एक प्लेटफर्म विशेष रूपमा एनिमेटेड gifs सिर्जना गर्नका लागि निर्मित।
सिनेगिफ प्लेटफर्ममा मात्र सीमितता (जुन म आशा गर्दछु तिनीहरू परिवर्तन हुन्छन) तिनीहरू केवल आयामहरूलाई ix०० पिक्सेल चौडा र 600०० पिक्सेल अग्लोसम्म अनुमति दिन्छन्।
वेबको रूपमा, एनिमेटेड gifs ट्विटर र Google+ मा सोशल मीडियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ (तर फेसबुक होइन… बूओ)। Google+ ले घटना र कभर फोटोहरूको लागि यसलाई अनुमति दिन्छ। एनिमेटेड gifs पावरपोइन्ट र कीनोट मा पनि काम गर्दछ ... मसला मद्दत तपाईंको अर्को प्रस्तुतीकरण। र एमएमएस मुख्य मुख्यधारा बन्न पछि, एनिमेटेड gifs आईओएस र एन्ड्रोइड पाठ सन्देश मार्फत पनि पठाउन सकिन्छ!
तपाईले स्टक किन्न सक्नुहुन्छ Cinegifs.
टैग: एनिमेटेड gifएनिमेसनसिनेगिफcinemagraphGIF